Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT) · Jolay, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT) · Jolay, 2018
Tantara mikasika ny Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT) tamin'ny Jolay, 2018
Singapaoro 29 Jolay 2018
Michel Gonzalez Nuñez: “Heveriko fa manafintohina ny mankatoa lalàna momba ny ‘fahapelahana’ ao anatin'ny revolisiona be risikain-dehilahy”
Amerika Latina 23 Jolay 2018
"Raha ampahany ihany ny zo sy fahafahana mametraka ny fiarahamonina ho "revolisionera", dia mila olona aho manazava amiko ny dikan'ny hoe "revolisionera". Misy fifanoheran-kevitra izany ho ahy."
Arzantina: Neken'ny Antenimierandoholona Ny Fanambadiana Eo Amin'ireo Mitovy Fananahana
Amerika Latina 18 Jolay 2018
Nohamafisin'ny antenimierandoholona arzantina ny lalàna iray izay mandrafitra ny miralenta eo amin'ny satan'ny fanambadiana, tsy misy fanavahana eo amin'ireo mpifankatia samihafa fananahana sy ireo mitovy fananahana ary ankoatra izay koa, ireo fitoviana zo amin'ny fananganana. Amin'ity fepetra ity, i Arzantina no firenena voalohany indrindra ao Amerika Latina nanome alalàna ny fanambadiana eo amin'ireo mpikambana mitovy fananahana.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 18 Jolay 2018
Namoaka ampahibemaso ny singa ratsy indrindra sy ny tsara indrindra teo amin'ny fiarahamonina Serba ny diabem-pireharehana natao tamin'ny 10 Oktobra 2010, tao Belgrady. Tsy maintsy nanakana ireo mpirotaka miisa 6.000, izay namotika zavatra mitentina 1 tapitrisa EUR tao afovoan-tanàna tamin'ny fomba voarindra ny polisy.
Amin'ny fanoherana ny zon'ny pelaka, miara-dalana mba hisara-kevitra kokoa ny solontenan'ny mpitondra fivavahana avy ao Trinite sy Tobago
Karaiba 08 Jolay 2018
Manao izay azonareo atao mba hampihenana ny vono olona, fametavetana ny ankizy, herisetra an-tokantrano, adin'ny andian-jiolahy, ny tsy fananana fialofana, fandrahonana ny fahalalaham-pitenenana, ny hantsana amin'ny karama, ny kolikoly,... Eh! Zava-dehibe kokoa ny fampiasana ny fitarihanareo hibaiko hoe iza no manan-jo na tsia hifankatia.
Mampiantrano ny diabem-pireharehan'ny pelaka voalohany ny vondrom-piarahamonina LGBT ao Goyana
Karaiba 06 Jolay 2018
#Guyana no firenena tokana Amerikana iray izay mbola tsy ara-dalàna ny fahapelahana. Vao avy nanatontosa ny diabem-pireharehany voalohany ny LGBT. Aleo antenaina fa ny tsy fanamelohana no ho avy manaraka
Amerika Latina 03 Jolay 2018
Vono olona mahatsiravina natao tamin'ny tanora pelaka iray ao Pôrtô Rikô. Nangataka ny vondrom-piarahamonina LGBT mba hotsaraina eo ambanin'ny lalàna mifehy ny heloka bevava fankahalana ny raharaha. Naneho hevitra momba ity heloka mahatsiravina ity ihany koa ny bilaogera.